Waa maxay farqiga u dhexeeya shaqaale bulsho iyo shaqaale bulsho? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 21/05/2021 23:05 | Talooyin
Waxaa jira astaamo xirfadlayaal kala duwan oo ka shaqeeya hamiga bulshada, U fidiso taageero dadka ku jira xaaladaha nugul. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira astaamo muujinaya, in kasta oo ay horumariyaan shaqadooda isla goobtaas, ku kala duwan yihiin nuyuutaro waaweyn.
Sida ereyga laftiisa uu tilmaamayo, fikradda shaqaalaha sooshalka waxaa loola jeedaa caawimaad. Tani waa habka loo qaato jimicsiga xirfaddan. Caawimadu waxay noqotaa habka caawimaad ee lagu garto shaqadan. Si kastaba ha noqotee, luqaddu way isbedeshaa oo, xilligan, erayga shaqaalaha sooshalka ayaa loo adeegsadaa in ka badan si loo qiimeeyo shaqada ay qabatay muuqaalkan.
1 Siyaabo kala duwan oo wax loo fahmo ayaa caawiya
2 Muxuu bartaa shaqaale bulsho?
3 Faa'iidooyinka waxqabadka bulshada
Siyaabo kala duwan oo wax loo fahmo ayaa caawiya
Guud ahaan, labada xirfadleba waxay ku shaqeeyaan koox, waxay qayb ka yihiin mashaariic kala duwan oo ka kooban astaamo is kaabaya. Dhammaantood waxay ku darmayaan koox isku xiran, maaddaama isla xaqiiqdaas laga dhaweyn karo aragtiyo kala duwan. Ka dib markay sameeyeen ogaanshaha xaalad murugsan, khubaradu waxay soosaaraan qorshe wax ka qabad si ay u siiyaan taageero ku filan koox gaar ah ama qof shaqsi ah.
Qof kasta oo bani aadam ahi wuxuu bulshada ku leeyahay xuquuq iyo waajibaad. Si kastaba ha noqotee, xuquuqda qofka waa lagu xadgudbi karaa sidii qof aan la arki karin. Sababtaas awgeed, adeegaha bulshada wuxuu u shaqeeyaa inuu difaaco fursadaha loo simanyahay maxaa yeelay sinnaantaan sidoo kale waxay fure u tahay horumarka dhammaan. Mararka qaarkood wax ka qabadku wuxuu dhacaa iyadoo ay sabab u tahay xaalad la aqoonsaday, taas oo kicinaysa baahida loo qabo caawimaad. Laakiin ka hortagga ayaa fure u ah horumarinta bulshada iyo ladnaan.
Muxuu bartaa shaqaale bulsho?
Tani waa mid ka mid ah kala duwanaanshaha aan ka heli karno shaqada bulshada. Ma jiro hal qorshe oo keliya oo u oggolaanaya xirfad-yaqaanku inuu ku fuliyo mas'uuliyaddan hay'ad gargaar oo khaas ah. Xirfadlaha ayaa qaadan kara shahaado jaamacadeed, laakiin sidoo kale waxaa jirta fursad lagu doorto barnaamijka Tababbarka Xirfadaha. Waa in la tilmaamaa taas astaamaha qaarkood waxay bartaan Degree ee Shaqada Bulshada ee jaamacadda. Laakiin Tababarka Xirfadaha, oo leh qaab wax ku ool ah, ayaa sidoo kale bixiya fursado shaqo oo arimahan ka mid ah.
Erayada adeegaha bulshada iyo shaqaalaha sooshalka waxay muujinayaan isla xaqiiqda dhabta ah ee nolol maalmeedka. Xaqiiqdii, waxaa loo istcimaalaa sidii iyagoo isku macno ah luuqad maalmeedka. Shaki la'aan, waxa ugu habboon ayaa ah lasocodka dadka kujira xaalad khatar ama nuglaansho. Laakiin luqadda lafteedu waxay muujineysaa kala duwanaansho muuqda. Habka ay qaadatay shaqada bulshada ayaa ka fogaanaya daryeelka asalka ah si loo kordhiyo awoodsiinta shaqsiyadeed ee kuwa, iyada oo loo marayo caawimadan, lagu helo ilo iyo qalab kale.
Sidan oo kale, qofka qaata gargaarka waa halyeeyga geedi socodkooda hagaajinta muddada-dheer. Iyada oo ku saleysan taageeradan, waxay leeyihiin xirfado cusub oo ay ku wajahaan xaaladaha maalinlaha ah iyo dhibaatooyinka.
Faa'iidooyinka waxqabadka bulshada
Waxqabadka bulshada waa lagama maarmaan si loo wanaajiyo danta guud. Iyo adeegyo khaas ah oo ka jira aaggan ayaa dhiirrigeliya wanaagga. Sidaa darteed, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya xirfadaha aan ku falanqeyneyno qodobkaan kuma xirna inta badan mas'uuliyadaha uu qaadayo shaqaale kasta, laakiin waa isbeddelka luqadda lafteeda taariikhda. Isbeddel ku yimid dhinaca oo ka tarjumaya isbeddel bulsheed iyo dareen cusub.
Shaqaalaha sooshalka ayaa hago oo lasocda shaqsiyaadka ama qoysaska. Una adeegso ilaha jira si aad u siiso taageeradan. Qof kasta oo u baahan wuxuu la xiriiri karaa shaqaalaha sooshalka ee aaggooda si uu uga codsado macluumaadka mowduuc gaar ah. Si kastaba ha noqotee, sida aan hore uga faalloonnay qodobkan Tababarka iyo Daraasaadka, Muhiimadda gargaarkaani waa samafal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Talooyin » Waa maxay farqiga u dhexeeya shaqaale bulsho iyo shaqaale bulsho?
Waa maxay tartanka wareejinta?